[Ukara] Wondershare QuizCreator: Ike Quiz Onye kere
ngwá ọrụ magburu onwe maka ndị nkuzi na-eji ICT ha ọmụmụ, m nwere ike ikwu na software ka 100%
M a na-eji quizcreator n'ihi na ihe karịrị 4 afọ na m ga-asị na bụ nnọọ zuru ezu ngwaahịa, ọ-enye gị ohere ịhọrọ site na otutu atụmatụ na ị nwere ike ịmepụta magburu onwe nyocha kwa. Nanị nsogbu m na uche idu ke eziokwu na nke a omume adịghị \_ 't ọrụ ma ọ bụrụ na ị na-eji ekwentị mkpanaaka ma ọ bụ mbadamba. N'ihi nke a ohere mbupụ na ajụjụ na HTML5 format ga-abụ nnọọ nnọọ kpọrọ ihe.
Nke a bụ oké ngwaahịa na m zụrụ afọ gara aga. Ọ dị mfe iji na-eme ka mmekọrịta ọdịnaya nnọọ ngwa ngwa. Nanị nsogbu bụ na ọ ga-arụ ọrụ na mobile ngwaọrụ dị ka ọ bụ Flash dabeere naanị.
Daalụ maka niile mmemme
- Iraqi SOLDER
Ọ na-pụtara software, ma ugbu a ọ bụ oge maka a mobile version :)
Great software m na-amasị ma, biko ịgbakwunye dị ka a atụmatụ mochi media ad id
- Akwụ ụgwọ
dị otú ahụ a egwu ngwa
bụ mma n'ihi na ọ ka anyị nwee ike ịmatakwu ekele
Nice omume, dị ka m! M nwere ya dị ka a Onyinye Efu na ọ bụ nnọọ mma iji ya maka ọrụ m. Ngwa ngwa na-arụ ọrụ, mfe chepụta, na-akpali iji na-eme ka ezigbo ihe quizes maka azụmahịa. Ma mma niile kasị ukwuu na delegent akwado otu, nnọọ enyi na enyi na mma mmadụ ke. Echere a ọma ga-eme n'ọdịnihu n'ihi na nke a omume na niile kasị mma ka ihe niile mmepe na ndị òtù Team. Hụrụ gị n'anya, Wondershare! Ị bụ ọkachamma!
Nke a quizcreator bụ oké ngwaahịa. Ọ bụ kpọmkwem ihe dị m mkpa maka nsuso mmụta site ụmụ akwụkwọ. Otú ọ dị, na-enweghị n'ụzọ ụfọdụ nke na-akpọ ya na mobile ngwaọrụ, (eg Emmanuel & Iphone & iPod), anyị na-ekpe na mgbaka nke inwe iji nweta ụmụ akwụkwọ na m mobile website, kwụsị iji mobile na-esi a PC ma ọ bụ a mobile na flash ọkpụkpọ ikike \_ "\_ 'cos ọ Don \_' t ọrụ na mkpanaka gị na \_". Echefuola ohere m \_ 'd-ekwu, n'ihi na ọbụna ibu ina maka ngwaahịa. Ọ ga-abụ oké ma ọ bụrụ na e nwere akpaka ụzọ ịhụ ike ọganihu na ndozi nke ndị mmadụ n'otu n'otu ka ha na-nọchiri ule.
Wondershare QuizCreator Bụ a dị ike ajụjụ onye na-ahapụ trainers na ndị nkụzi na ike ọkachamara Flash dabeere quizzes na nnyocha ndị na multimedia. Ngwa ngwa chepụta gị ntule na-ebipụta online, na mgbe ahụ soro na ajụjụ results na-enweta mmụta akụkọ site Wondershare QuizCreator Online nke na-arụ ọrụ seamlessly na QuizCreator.
Ahu nagide 18 ajụjụ ụdị, gụnyere Multiple Nhọrọ, Wet ke ide, kenha, Likert n'ọtụtụ & Short edemede.
Eme ajụjụ na ihe oyiyi, Flash video na audio, gụnyere olu-ihe karịrị, ederede na-ekwu okwu, wdg
Fanye mgbakọ na mwepụ na sayensị akara na akụkụ nchịkọta akụkọ ike quizzes maka mgbakọ na mwepụ, Physics, na Chemistry.
Pụtara Quiz Ntọala
Mee ka gị na ajụjụ ọzọ aka na oge ókè na randomization.
Alaka ajụjụ takers dị iche iche ajụjụ dabere na ha Ibọrọ.
Nọrọ ná nchebe gị ajụjụ na okwuntughe ma ọ bụ a na ngalaba hosting ịgba.
Tụọ arụmọrụ na a onwe-grading usoro.
Nye nzi nyochaa nakwa dị ka nzaghachi.
Họrọ a ọkpụkpọ template na ndị kwesịrị ekwesị isiokwu gị ajụjụ.
Chepụta gị onwe gị ajụjụ template-ewu na-mwube atụmatụ.
Itinye aka sonyere na music ma ọ bụ ụda mmetụta.
Enweta ihe ọkpụkpọ ndebiri dị online >>
5 Publishing Nhọrọ
Ebipụta flash quizzes ka QuizCreator Online.
Bulite bipụtara Flash ajụjụ na Web.
N'ịwa a SCORM ajụjụ ngwugwu maka òtù LMS.
Emepụta nguzo-naanị exe faịlụ maka CD.
Export ka Okwu ma ọ bụ Excel faịlụ maka akwụkwọ dabeere na ule.
N'ihi Ndepụta na-akọkwara
Email Ndepụta: Akpaghị aka izipu ajụjụ results gị kpọmkwem E-mail adreesị.
Òtù LMS Ndepụta: iwekota a SCORM / AICC ajụjụ ngwugwu ọ bụla òtù LMS dị ka Moodle, bọọdụ, weèb ma ọ bụ WebCT.
QuizCreator Online Ndepụta: QuizCreator Online ahapụ gị soro results-enweghị ihe dị oké ọnụ òtù LMS. Enwe adaba ochichi atụmatụ na-enweta mmụta akụkọ haziri ajụjụ, azịza ya, akara, soò na, wdg
Ọrụ Mma na ndị ọzọ Quiz creators
-Arụ ọrụ na QuizCreator Online soro ajụjụ results na-akpaghị aka na n'ịwa mmụta akụkọ amamihe.
Mụta ihe banyere QuizCreator usoro >>
The maara Ribbon ịke menu nwere ihe nile ngwaọrụ gị mkpa ma na-eme ka ọ dịkwuo mfe na-eme ka a zaa ajụjụ & nnyocha e mere.
Wuru na-anwansị checker iji jide n'aka na okwu nile ọ bụla bụ nri maka ọkachamara quizzes na nyocha.
Were a anya ikpeazụ ajụjụ / nnyocha e mere tupu ebipụta.
Mee ka a Quiz na Ule Generator welie Izi na Ọmụmụ